Mero Report :: लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी सवाल समुह
लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी सवाल समुह
यो समुहमा समुदायस्तरमा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण क्षेत्रको सुशासन सम्बन्धी समस्या तथा सवाल र उक्त सवालको सम्बोधन गर्ने स्थानीय उपाय बारे छलफल गर्न सकिन्छ ।
Nov 29, 2018 Thursday
महिला हिंसा न्यूनिकरणमा आमनागरिक र सञ्चार माध्यमकाे भूमिका के हुनुपर्ला ?
नेपालमा महिला हिंसा तथा बलात्कारका घटनाहरुमा वृद्धि भईरहेको भनी समाचार तथा तथ्याङ्कहरु सञ्चार माध्यममार्फत निरन्तर बाहिर आइरहेको सन्दर्भमा तपाईलाई समाजमा यस्ता घटनाहरुको न्युनीकरण गर्नका लागि नागरिक समाज र अन्य सरोकारवाला निकायले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्दछ ? कृपया तपाईको विचार व्यक्त गर्नुहोला ।
Dec 06, 2018 Thursday
हिंसा त्यो महिलालाई होस् या पुरुषलाई । परिवारबाट नै सुरु हुन्छ । यसको न्यूनिकरणको लागि पनि सबैभन्दा पहिले आफै र आफ्नो परिवारबाट नै सुरु गर्नुपर्छ । यससँगै नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायहरुले पनि यसको न्यनूकिरणमा ठूलो भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । संस्थाहरुले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, हिंसाले पारेको मानव जिवनमा प्रभाव , हिंसापछिको पारिवारिक स्थिती, त्यो स्थितीबाट कसरी माथि उठ्ने, जस्ता कुराहरुलाई समेटेर सडक नाटक लगायत विभिन्न कार्यक्रम गर्न सक्ने छन् । यसमा महिलाको भन्दा पनि पुरुषको सक्रिय सहभागीताको आवश्यक देखिन्छ । विद्यार्थीहरुले व्यवहारिक शिक्षा घरबाटै प्राप्त गर्छन् । त्यसैले उनीहरुलाई घरबाटै राम्रो व्यवहारिक शिक्षा दिन अभिभावकले पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै विद्यालयको पाठ्यक्रममा पनि हिंसाका विषयलाई समावेश गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
Oct 31, 2018 Wednesday
बलात्कारका घटनाहरुको न्युनीकरणका लागि तपाईँहरुलाई आम नागरिक तथा सञ्चार माध्यमले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्दछ ?
नेपालमा प्रत्येक वर्ष महिला हिंसा तथा बलात्कारका घटनाहरु बृद्धि भइरहेको छ । नेपाल प्रहरीको तथ्याङक अनुसार आर्थिक बर्ष ०७२/७३ मा बलात्कारका घटना एक हजार ९३ रहेकोमा सो संख्या ०७३/७४ एक हजार १ सय ३७ पुग्यो भने ०७४/७५ सो सख्या बढेर एक हजार ४ सय ८० पुग्यो । यसरी समाजमा बलात्कारका घटनाहरु बृद्धि भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता घटनाहरुको न्युनीकरणका लागि तपाईँहरुलाई आम नागरिक तथा सञ्चार माध्यमले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्दछ ?
समाजमा बलात्कारका घटनाहरु बृद्धि भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता घटनाहरुको न्युनीकरणका लागि तपाईँहरुलाई आम नागरिक तथा सञ्चार माध्यमले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्दछ ?